Sanliurfa Metropolitan Cadres Iji Jiri Ọgbọ Ọhaneze | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèŞanlıurfa Cadropalitan Cadres Ga-eji Ọkwa Public
15 / 12 / 2017 ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey, tram, Trolley ụgbọ ala
Sanliurfa Metropolitan Mayor Nihat Ciftci wepụtara okirikiri dị ka ndị isi ngalaba okirikiri na ndị isi ngalaba, gụnyere ndị isi obodo ukwu, ga-eji ụgbọ njem ọha na-ebugharị n'obodo.
Onye isi obodo Nihat çift ,i, onye nyere mmalite nke mmejuputa iwu a, kwuru, sị: tir Ebumnuche anyị bụ ime ka obodo anyị na uche na-emekwu nke ọma site n'ige ntị na ntinye nke ndị anyị.
Na Sanliurfa, a na-eme ka ọrụ elektrik ọ bụla nke 190 njem njem ọha kwa ụbọchị nke ọtụtụ puku ndị mmadụ na njem nke obodo mepere emepe na mmepụta ọzọ. Onye isi obodo nke Şanlıurfa Obodo isi obodo Nihat Çiftçi malitere ịrụ ọrụ na 'Transportgbọ njem Ọha na Obodo', nke etinyere ka ya na ndị mmadụ nwee mmekọrịta chiri anya ma gee ntị na ntinye na ntinye aka na otu.
N'ime obodo, 2. Ebe a na-ebugharị zukọtara na njikwa ụgbọ elu niile nke obodo ukwu gaa Onye isi ala Nihat Ciftci, na-ege ntị na nsogbu nke ndị mmadụ n'oge njem ahụ nyere ozi banyere ọrụ nke Obodo Obodo.
RB RR FIRST UKWU AH THER IS N’ANYA
N'ime ogo nke ihe ọmụmụ a, ndị isi nchịkwa kachasị elu na-aga njem dị iche iche, ebe Onye isi ala Presidentiftçi họọrọ njem ahụ na Mahadum Harran. Ọrụ ugbo nọ na bọs na ụmụ akwụkwọ chatter Mr President, Turkey-ntà obodo na nkezi, afọ nke 19 kwuru na ha dị mkpa ka ike a otu na mkpa nke na-eto eto na Şanlıurfa.
CHAIRMAN FARMER: DAILY AVERAGE 190 THOUSAND CAN CARRY
Na Turkey, ndị dị ọnụ ala ọha iga Farmers onye kwukwara na ha na-ejere ndị President, kwuru na ha na-eme 190 puku nkezi, kwa ụbọchị njem iga. N'ikwu na ha ga-enweta echiche nke ụmụ amaala na nke a site n'ọmụmụ ihe ọmụma, Onye isi obodo Çiftçi kwuru, “Anyị na ndị odeakwụkwọ ukwu anyị, ndị enyemaka na-ahụ maka ndị isi, ndị na-ahụ maka ndị isi, ndị na-ahụ maka ndị isi, ndị isi ngalaba na ndị na-ahụ maka ngalaba na-ahụ maka ọrụ mmata. Şanlıurfa Obodo isi obodo bụ ọrụ ụgbọ njem ọha na-adịghị ọnụ n'etiti ndị obodo.
Ọrụ ndị njem nke Ngalaba Na-ebugharị ọha a na-arụ n'ụzọ dị mma. Dị ka obodo, anyị na-arụ ọrụ ọhụrụ na njem na njem ọha. A na-emejupụta oru ngo a nke Trambus, nke na-enweghị jụụ, enweghị mkpọtụ ma ọ nweghị ike, n’obodo anyị ugbu a. Ihe omumu ihe omumu nke Tramway na atumatu oru agwuwo ma ugbua akwadoro ntinye ngo a. A na-akwado atụmatụ njem njem Şanlıurfa ma anyị tinye mkpa dị na usoro ndị a.
Şanlıurfa Obodo isi obodo na-eburu ndụ 190 puku kwa ụbọchị. Iji mepụta mmata a, iji hụ na ịchịkwa omume anyị na iji rụpụta nsonaazụ, m nyere okirikiri dịka onye isi obodo nke Obodo ukwu. Dị ka onye isi obodo nke Obodo ukwu, odeakwụkwọ odeakwụkwọ m, ndị isi njikwa, ndị isi ngalaba na ndị na-ahụ maka ngalaba ga-eji ụgbọ njem ọha na eze site ugbu a gaa n'ihu ”.
Zuo oke site na ụmụ akwụkwọ
Ngwa Onye Isi Çiftçi natakwara akara zuru oke site n'aka ụmụ akwụkwọ na-eji ụgbọ njem ọha. Farmers na President ya nwere obi ụtọ mee njem a ọnụ na-Harran University ụmụ akwụkwọ na-ekwu na omume a ga-abụ ihe nile ihe nlereanya Turkey, ndị President kelere ndị ọrụ ugbo na Metropolitan mkpara ruru ka uche.
Project ụgbọ mmiri
Mahadum nke Harran
Agha na ọṅụ nke ụgbọ oloko na Giresun
Nnukwu njem na Izmir ma kwụọ ụgwọ ka ị na-aga usoro